Khronos Boka rine nhengo nyowani: Razer | Linux Vakapindwa muropa
Khronos Boka ndeimwe mubatanidzwa wekumisikidzwa kwematanho akavhurika ayo akabatanidza nhengo, senge Linux Foundation. Kune avo vasingazive Khronos parizvino, ndivo vari kumashure kwemapoka ekushandira mapurojekiti akaita seVulkan, OpenCL, OpenGL, OpenGL ES, OpenKODE, OpenMAX, OpenMAX, OpenSL ES, OpenVG, OpenWF, nezvimwe. Mamwe acho anoshandiswa zvakanyanya seOpenGL uye iwo aunonyatso shandisa mukugovera kwako se graphical API.
Huye, Khronos Boka iri mari uye inogamuchira mipiro pakuvandudzwa kwemapurojekiti aya emakambani makuru mazhinji muchikamu ichi, anosanganisira AMD, Intel, Samsung, Qualcomm, Apple, ARM, Google, Nokia, NVIDIA, Valve, Blizzard, Mozilla, IBM, LG, Pstrong, Red Hat, uye a runyorwa rurefu kwazvo rwemakambani makuru nemasangano anokurudzira, kupa, anobatanidzwa, kana kuve enhengo yechikoro chevadzidzi. Rondedzero yacho inopedzisa iyo iwe unogona kuona pano.
Zvakanaka, ikozvino isu tinogona kuzivisa iyo huru nhau kuti kune imwezve imwe nyowani nhengo. Vazhinji uye vanogadzira uye makambani makuru ari kubatana pamatanho akavhurika uye mapurojekiti. Ino nguva ndeye kubva kuchikamu che Hardware, icho vazhinji vatambi vanozoziva. Izvo ndezve Razer sezvandataura mumusoro wenyaya ino. Iye zvino kambani inobatana senhengo. Chinangwa ndechekuvandudza uye kubatsira kune icho chikonzero kuti usimbise ngowani yako chaiyo chaiyo uye OSVR.
Nhau dze Razer Izvo zvave zvichizivikanwa apo Iyo Khronos Boka yakazvizivisa mune chitsamba: «Khronos Group inodada kuzivisa kuti Razer ajoina senhengo iri kubatsira. Razer ndiye mutungamiri wepasirese mune zvishandiso uye software kune yakabatana gamers. Yakave yakapihwa dhizaini yayo uye tekinoroji yezvipenga, inokwanisa kupfeka odhiyo matekinoroji, uye Razer OSVR, yakavhurika sosi chikuva inobatanidza VR, AR, uye Hardware uye software APIs nerutsigiro rwepasirese kune iyo chaiyo chaiyo ecosystem.".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Khronos Boka rine nhengo nyowani: Razer
Munguva pfupi tichava newatchwatch neGnu / Linux nekuda kwechikwata cheJolla